रोचक – List Khabar
Home / रोचक
1 day ago रोचक 0
काठमाडौं, सारा ब्रह्माण्ड कति ठूलो छ। यो कुरा मानिसलाई थाहा छैन । सायद यो कहिल्यै हुनेछैन। तर वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्म देखेका सबै ब्रह्माण्डलाई एउटै तस्वीरमा कैद गर्ने प्रयास गरेका छन्। यो तस्बिर धेरै अचम्मको छ, तपाई यसलाई हेर्दा मात्र यसमा हराउनुहुनेछ। हामीलाई के थाहा ब्रह्माण्ड कति ठूलो छ। तर अमेरिकी अन्तरिक्ष …
7 days ago रोचक 0
एजेन्सी । एक इन्डोनेसियाली महिलाले आफू समलिङ्गी विवाहको हिस्सा भएको भर्खरै थाहा पाएकी छिन् । उनले १० महिना अघि विवाह गरेका उनका श्रीमान् महिला भएको थाहा पाएपछि आफू तीन छक परेको बताएकी छिन् । एन ए भनेर चिनिने जाम्बी सहरकी २२ वर्षीया महिलाले आफ्ना श्रीमानलाई एक डेटिङ एपमा भेटेकी हुन् …
1 week ago रोचक 0
एजेन्सी,बलिउडका मेगास्टार अमिताभ बच्चनकी नातिनी नव्या नन्दा शोबिजबाट टाढा भएपनि स्टार किड्सको सुचीमा उनी सधैं फ्यानमाझ लाइमलाइट हुने गर्छिन् । यो स्टाइलिश लुक होस् वा उद्यमशीलता उद्यम, नव्या सधैं चर्चामा छ। २५ वर्षीया नव्या दिनहुँ चर्चामा आउने गर्छिन् । यसपटक उनी आफ्नो एउटा भिडियोका कारण फ्यानमाझ चर्चामा आएकी छिन् । …
एजेन्सी ताइवानी एक नर्सका तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा भा,इरल भइरहेका छन् । २३ वर्षीया नर्स केरीना लिनले अहिले इन्टरनेटमा तहल्का मच्चाएकी हुन् ।उनकै कारण ताइवानको एक अस्पतालमा पुरुष बिरामीहरुको थेगी नसक्नु लाइन लाग्ने गर्छ। उनीहरु त्यहाँ राम्रो डाक्टर भएको कारण होइन, राम्री नर्स भएका कारण आउने गरेको बताइन्छ ।इन्स्टाग्राममा उनका फ्यानहरुको …
एजेन्सी । साउथ नायिका काजल अगरवालको चर्चा अस्ति भन्दा हिजो र हिजो भन्दा आज ब्यापक बन्दै गइरहेको छ ।साउथकी नायिका भए पनि सुन्दरताका कारण उनको चर्चा विश्वका धेरै देशमा हुने गरेको छ ।सन् १९८५ को जुन १९ मा मुम्बइमा जन्मेकी काजल खासगरी तेलेगु र तामिल फिल्महरुले सफलताको शिखरमा छन् । …
के भर्ती हुनको लागी महिला भर्जिन हुनै पर्छ,,के के जाँच गरिन्छ त ,,जानकारीको लागी हेर्नुहोस्
2 weeks ago रोचक 0
के भर्ती हुनको लागी महिला भ*र्जिन हुनै पर्छ,,के के जाँच गरिन्छ त ,,जानकारीको लागी हेर्नुहोस् भिडियो ना’रीलाई शक्तिको रूप मानिएको छ, यो नारी श’क्तिले देश भित्र र बाहिर रहेका श\_’त्रुहरूबाट देशको रक्षा गर्नुका साथै यिनलाई उचित जवाफ दिइरहेको छ । सरकारले पनि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ । प्राथमिकताका आधारमा से’नामा …
रहस्यमयी हुन्छन् यी ५ राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन ?
काठमाडौँ । केही मानिसलाई बुझ्न साँच्चिकै कठिन हुन्छ। यस्ता मानिस कतिपय अवस्थामा नसोचेको व्यवहार गरेर सबैलाई आश्चर्यचकित पार्छन्। यो मान्छेले अब के गर्छ भनेर कसैले अनुमान नै लगाउन सक्दैन। तर ज्योतिष शास्त्रका माध्यमबाट त्यस्ता मानिसका विषयमा सजिलै जानकारी लिन सकिन्छ अर्थात् उनीहरूलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ। जन्म समयमा पर्ने ग्रह नक्षत्रको …
रुँदा आँखाबाट आँशु किन बग्न थाल्छ ? धेरै मानिसहरूलाई वास्तविक कारण थाहा छैन ….
मान्छे रुँदा आँखाबाट आँशु निस्कन्छ । तर यसको कारण के तपाईलाई थाहा छ ? आज हामी तपाईलाई बताउनेछौँ कि मानिस किन रुन्छन् र रुँदा उनको आँखाबाट आँशु किन आउँछ ? रोएको कसैलाई मन नपर्ला, तर माया र दुःखका धेरै कारणहरू छन् जसले गर्दा मानिसहरूको आँखाबाट आँशु बग्न थाल्छ। आँसु हाम्रो …
केटा मान्छेलाई मन नपर्ने केटि मान्छेका ५ बानीहरु
सामान्यतया छोरी मान्छेहरु सबैकुरा पर्फेक्ट चाहान्छन। अनि धेरैजना केटी मान्छेहरु आफ्नो पार्टनर माथि रोकछेक गर्न अनि आफ्नो हैकम जमाउन पाउँदा पनि खुशी हुन्छन। यसरि यदि तपाइंलाई पनि हरेक कुरामा आँफुलाई जिताउने अनि माथि राख्ने बानि छ भने त्यसलाई सुधार गरि हाल्नुहोस नत्र तपाइंको पार्टनरले तपाइँ संग दुरी बढाउन समय लाग्दैन। …
लोकसेवामा नक्कली परीक्षार्थीको सेटिङ, २० देखि ३० लाखसम्म लिने पोखराका बस्ताकोटी पक्राउ
2 weeks ago रोचक, समाचार 0
पोखरा, ३ असार – लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पटक पटक आन्तरिक सेटिङका घटना बाहिरिँदै आएको छ । नक्कली परीक्षार्थी लगाएर परीक्षा दिन लगाउने गरेको धेरै पटक खुलासा भएको छ । पोखरा-२४ कास्कीकोटका एक जना शिक्षकले पनि लामो समयदेखि नक्कली परीक्षार्थी लगाएर परीक्षा दिने गरेको खुलेको छ । कास्कीकोटका कालिका माविका उपप्रधानाध्यापकसमेत …